Noloshu way ku fiicantahay saaxiibbada dhabta ah. - qarsoodi - Quotes Pedia
Noloshu way ku fiicantahay saaxiibbada dhabta ah. - Qarsoodi
Noloshu way ku fiicantahay saaxiibbada dhabta ah, taasina waa run! In kasta oo ay dad badani nagu hareersan yihiin, haddana waxa jira dad tiro badan oo runtii innaga qiimeeya dareenka dhabta ah. Waa muhiim in la fahmo in qofkasta uusan kuu aqoonsan doonin sidaad tahay!
Noloshu way fiicantahay marka aad yeelato saaxiibbadaada dhabta ah ee kugu xeeran, kuwa kuu ballan qaadaya in ay kula joogi doonaan si kasta oo dhibaato ku jirto, runtiina waa ay sameeyaan inkasta oo ay jiraan caqabadaha ay tahay in aad nolosha ku dhex marto.
Jidka nolosha ma fiicna, waxaa ka buuxsamaya hoos u dhac iyo hoos, laakiin marka aad heysato dad fiican oo agtaada jooga, waa sababaha aad u dareento inay wax uun kuu muuqanayaan.
Waligaa ha moogaan asxaabtaada runta ah, oo iska hubi inay marwalba kula jiraan, waayo waxay ku siin doonaan xoog marka aad dareento hoos u dhac. Saaxiibbada saxda ahi waxay naga dhigaan dhiirrigelin markasta oo aan ku sii yaraano kalsoonida nafteena.
Waa sababaha aan kor ugu qaadno tamarta iyo soo nooleynta marwalba. Dhab ahaan noloshu waa ka fiicnaataa, haddii kalese, waxay umuuqataa inaan fiicnaaneyno markaan dadkeenna sidan oo kale ah dhinacayaga iska haysanno.
Marka ay hareereeyaan asxaabta runta ah, waad ogtahay inaad ugu yaraan lahaan doontid dhamaadka maalinta. Saaxiibbada saxda ahi maahan kuwa dhaqaalahaaga kaa caawiya, laakiin waa kuwa adiga kugu garab taagan xitaa markay tahay duufaanta ugu adag ee kugu soo food leh.
Iyagu waa dadka adiga kugu jecel midka aad tahay, kuna dhiirrigeliya inaad si ka wanaagsan sidii hore u sameyso maalin kasta. Iyagu waa kuwa adiga kugu rumaysta xitaa adduunkoo dhan inuu kaa horyimaado.
Dadkani waa dad wehel ah oo aad waxkasta ku qaban kartid iyo wax kasta, adigoon xitaa xanaanayn wax kale. Noloshu waa ka fiicantahay marka aad dad noocaas ah la mid tahay.
Waad ogtahay in dadkani garab istaagi doonaan kaliya maahan markii aad faraxsan tahay iyo ugu sarreysa guushaada, laakiin sidoo kale waxay u joogi doonaan inay ku taageeraan markaad la tacaaleyso dhibaatada.
Noloshu way fiicnaaneysaa markaad ogtahay in kuwaan Nafo qurxoon ayaa u jooga inay ku hagaan.
Quotes saaxiibtinimo quruxsan
Waxaad dareentaa xigashooyin ka sii fiican
Wakhtiyada adagi waxay muujinayaan xigashooyinka asxaabta saxda ah
Xigasho On saaxiibtinimada
Xigashooyin ayaa kaa dhigaya dhoola cadeyn iyo wanaag
Xigashooyin saaxiibtinimo macaan
Xigashooyinka asxaabta saxda ah
Erayada saaxiibbada saxda ah
Xigashooyin saaxiibtinimo run ah
Xigashooyinka Dhaqdhaqaaqa dhabta ah
Xigashooyin run ah
Erayada runta ah
Xigasho saaxiibtinimo xigmad
Markii aad sii gabowdaba, dhab ahaantii waxaad kaliya dooneysaa in lagu hareereeyo dad wanaagsan. Dadka adiga kuu wanaagsan, kan kuu wanaagsan, iyo naftaada ugu wanaagsan. - Qarsoodi
Markii aad gabowdid, waxaad kaliya u baahan doontaa inaad dad fiican ku hareereyso. Si tartiib tartiib ah ayaad u noqon doontaa…
Riyoodku waa mid ka mid ah qaybaha lagama maarmaanka u ah nolosheena. Haddii qof aanu riyoon, qofkaasi aad ayuu u leeyahay…
U dabaal daga waxyaalaha yaryar oo nolosheenuna sii weynaato weligeed. - Qarsoodi
Noloshu waxaa ka buuxa raaxo yar oo aan badanaa kormeerno. Haddii aan hareeraha eegno, ubaxa yar ee…
Waxba ha ku degdegin. Markuu wakhtigu sax noqdo, way dhici doontaa. - Qarsoodi
Ha ku degdegin wax. Waa muhiim in la fahmo dhacdo kasta iyo nolosheena oo dhan…
Wax ka barashada khaladaadkaaga waa xikmad, laakiin wax ka barashada khaladaadka kuwa kale way dhakhso badan tahay waana fududahay. - Qarsoodi
Wax ka barashada khaladaadkaaga waa xikmad, laakiin wax ka barashada khaladaadka kuwa kale way dhakhso badan tahay waana fududahay. -…